Google inofunga kumisa mirau mitsva yekuvandudza yakavhurika sosi chengetedzo | Linux Vakapindwa muropa
Kuchengeteka kweakavhurika sosi software kwakwezva kutariswa kweindasitiri, asi mhinduro dzinoda kubvumirana pamatambudziko uye kubatana mukuitwa.
Dambudziko rakaoma uye kune akawanda maficha ekuvhara, kubva pane cheni yekutengesa, manejimendi manejimendi, kuzivikanwa, pakati pezvimwe zvinhu. Kuti uite izvi, Google ichangoburitsa hwaro ("Ziva, Dzivirira, Gadzirisa") iyo inotsanangura kuti indasitiri ingafunge sei nezvekushupika munzvimbo yakavhurika uye nenzvimbo dzakananga dzinoda kugadziriswa kutanga.
Google inotsanangura zvikonzero zvayo:
"Nekuda kwezviitiko zvenguva pfupi yadarika, software yepasirose yawana nzwisiso yakadzama yenjodzi chaiyo yekurwiswa kwecheni. Vhura sosi software inofanirwa kunge isina njodzi kubva pakuona kwekuchengetedza, nekuti kodhi dzese uye kutsamira zvakavhurika uye zvinowanikwa kuti zviongororwe uye kuongororwa. Uye nepo izvi zvichinyatso kuitika, zvinofungidzirwa kuti vanhu vari kunyatso kuita iri basa rekuongorora. Uine kutsamira kwakanyanya, hazviite kuti utarise zvese uye mazhinji akavhurwa sosi mapakeji haana kuchengetedzwa zvakanaka.
“Zvakajairika kuti chirongwa chivimbe, zvakananga kana zvisina kunangana, kuzviuru zvemapakeji nemaraibhurari. Semuenzaniso, Kubernetes ikozvino zvinoenderana nezvakatenderedza 1000 mapakeji. Vhura sosi ingangodaro inoshandisa kutsamira pane kungoita software uye inouya kubva kune yakafara nzvimbo yevatengesi; huwandu hwemasangano akazvimirira anogona kuvimbwa anogona kunge ari akakura kwazvo. Izvi zvinoita kuti zvinyanye kuomarara kuti unzwisise kuti sosi yakavhurika inoshandiswa sei muzvigadzirwa uye ndeapi matambudziko anogona kunge akakodzera. Iko hakuna zvakare vimbiso yekuti izvo zvinovakwa zvinoenderana nekodhi kodhi.
Mukati megadziriro yakatsanangurwa neGoogle, zvinokurudzirwa kupatsanura dambudziko iri muzvikamu zvitatu zvine dambudziko rakazvimiririra, imwe neimwe iine zvinangwa.
1 Ziva kusagadzikana kwesoftware yako
2 Dzivisa kuwedzera matsva matsva
3 Gadzirisa kana bvisa kusagadzikana
Ziva kusagadzikana kwesoftware yako
Kuziva kwako kushomeka kwesoftware kwakanyanya kuomarara kupfuura zvaungatarisira nezvikonzero zvakawanda. Hongu OK pane nzira dzekuzivisa kusagadzikana, hazvina kujeka kana zvichikanganisa chaiko shanduro dze software dzauri kushandisa:
Chinangwa: Yakarurama Dambudziko Rekukuvara Dhata: Kutanga, zvakakosha kutora chaiyo yekusagadzikana metadata kubva kune ese aripo data sosi. Semuenzaniso, kuziva kuti ndeipi vhezheni yakaunza kushupika kunobatsira kuona kana software iyi ikanganisika, uye kuziva kana ichinge yakabatirwa mhedzisiro mukugadzirisa kwakakodzera uye nenguva (uye hwindo rakamanikana rekushandisa zvisirizvo). Sezvineiwo, kupatsanurwa kwebasa rekufambisa kunofanirwa kunge kuri automated.
Chechipiri, kutambura kwakawanda kuri mune kwako kutsamira, pane kuita kodhi iwe yaunonyora kana kudzora yakanangana. Saka kunyangwe kodhi yako ikasachinja, iyo mamiriro ekushomeka anokanganisa software yako anogona kugara achichinja - mamwe akagadziriswa uye mamwe akawedzerwa.
Chinangwa: Yakajairwa schema yekushomeka dhatabhesi Zvivakwa uye maindasitiri zviyero zvinofanirwa kuteedzera uye chengetedza yakavhurika sosi kushupika, kunzwisisa mhedzisiro yavo, uye kugadzirisa kwavo kudzikisira. Chirongwa chekushupika chinobvumidza maturusi akajairwa kumhanyisa pane dzakawanda dhatabhesi uye kuita nyore basa rekutevera, kunyanya kana kusasimba kuchidarika mitauro yakawanda kana masisitimu.
Dzivisa kuwedzera matsva matsva
Zvingave zvakanaka kudzivisa kugadzirwa kwekusasimba Uye nepo kuyedza uye kuongorora maturusi kuchingobatsira, kudzivirira kunogara kuri nyaya yakaoma.
Pano, Google inofunga kutarisa pazvinhu zviviri chaizvo:
Nzwisisa njodzi kana uchisarudza pane kutsva kutsva
Natsiridza yakaoma software yekuvandudza maitiro
Gadzirisa kana bvisa kusagadzikana
Google inobvuma kuti dambudziko rezvekugadzirisa riri pamusoro pekutarisa, asi muparidzi anotenda kuti pane zvimwe zvakawanda zvinogona kuitwa nevatambi kugadzirisa dambudziko iri yakanangana nekugadzirisa kusagadzikana mukutsamira.
“Nhasi pane rubatsiro rwudiki pane izvi, asi sezvo isu tichivandudza kunyatsoita, zvinobatsira kuisa mari muzvirongwa zvitsva nematurusi.
"Imwe sarudzo, chokwadika, ndeye kubatisisa kutapurika zvakananga. Kana iwe uchikwanisa kuita izvi nenzira yekumashure inoenderana, mhinduro inowanikwa kune wese munhu. Asi chinetso ndechekuti iwe haugone kuve neruzivo nedambudziko kana kugona kwakananga kuita shanduko. Kugadzirisa kusagadzikana kunofungawo kuti avo vane basa rekuchengetedza software vanoziva dambudziko uye vane ruzivo uye zviwanikwa zvekuburitsa kusagadzikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Google inofunga kuumba mitemo mitsva yekuvandudza yakavhurika sosi yekuchengetedza
Jose Antonio akadaro
Iyo yekutanga muChirungu inoti:
Pano tinotarisa pane maviri chaiwo maficha:
- Kunzwisisa njodzi kana uchisarudza pane kutsva kutsva
- Kuvandudza maitiro ekuvandudza eakaomesesa software
Iyo vhezheni "LinuxAdictos" inoti:
- Nzwisisa njodzi pakusarudza kupindwa muropa kutsva.
- Kuvandudza kwakakomba software yekuvandudza maitiro
Kupindwa muropa kutsva!?
Pindura José Antonio
Debian 10.8 inouya neyakagadziridzwa NVIDIA mutyairi uye zvimwe zvakawanda zvinogadziriswa